Save thousands of pound to get international Degree/Diploma in Business
Depends on your choice part-time
or full-time and join local or
appotunity for self-study
The International Recognise Business
Degree and Diploma from UK
ABE is recognised around the world- from the Office of Qualifactions and Examinations Regulations (Ofqual ) in the UK,to equlvalent bodies and employers worldwide.in the UK, to equlvalent bodies and employers worldwide.
You can study part-time or full-tie, whichever suits you best. You can either joinalocal college or opt for selfstudy. Our range of business qualifactions and network of accredited colleges worldwide adds to our accessibility.
Efficiency and Effectiveness ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာ Universiy/ College(၁၂၀) ကျော်မှ အသိအမှတ်ပြုသော Diplomaများနှင့် Post Graduate Diploma (MBA 1st year) အထိ သင်ယူခွင့်ရှိပြီး ကုန်ကျစရိတ်မှာလည ်း အသက်သာဆုံးဖြစ်သည့်အတွက် ရည်မှန်းချက် ကြီးမား၍ ကြိုးစားလိုစိတ်ရှိသော လူငယ်များနှင့် မိမိတို့သားသမ ီးများဧ။် ရှေ့ရေးအတွက် စိတ်ချနိုင်စေရန် ပညာရေးတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံလိုသော မိဘများအတွက် အကောင်းဆုံးသော အခွင့်အရေးတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။
We can have some awesome caption
လေးစားအပ်ပါသောလူကြီးမင်းများခင်ဗျား • ရှိရင်းစွဲ Customer များ တစစလျော့နည်းလာပါသလား။ • Customer များတိုးလာသော်လည်း လုပ်ငန်း၏ ဝန်ဆောင်မှု အရည်အသွေး ကျဆင်းလာခြင်း(သို့) Customer များ၏ လုပ်ငန်းအပေါ်ကျေနပ်မှု လျော့ကျလာပါသလား။ • Sales Representative( အရောင်းကိုယ်စားလှယ်) များ၏ လျာထားချက်နှင့် လက်ရှိရောင်းအားကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ သိရှိလိုပါသလား။ • သင်၏ စီးပွါးရေးလုပ်ငန်းသည် Small Business (အသေးစားလုပ်ငန်း) မှ Medium Enterprise (အလတ်စားလုပ်ငန်း) သို့ တိုးတက်လိုပါသလား။ •
Business Management Higher Diploma Examination စာမေးပွဲရလာဒ်များ
သမဝါယမတက္ကသိုလ် (သန်လျင်) နှင့် Wise College တို့ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သည့် Business Management Higher Diploma Examination စာမေးပွဲရလာဒ်များ
လေးစားအပ်ပါသောလူကြီးမင်းများခင်ဗျား • ရှိရင်းစွဲ Customer များ တစစလျော့နည်းလာပါသလား။ • Customer များတိုးလာသော်လည်း လုပ်ငန်း၏ ဝန်ဆောင်မှု
Room No.1009, 10th Floor, Yuzana Tower,
Corner of Gabaraye Pagoda Road & Shwe Gone Dine Road ,
Bahan Township ,
(95) 09 2535 28520, 09 4211 5486